China Classic Men Sport Warshad muraayadaha muraayadaha ka sameysan iyo alaab-qeybiyeyaasha | Yinfeng
Ragga kalluumaysata ee wada muraayadaha qoraxda waxay isku daraan PC-ga caadiga ah iyo birta leh lenses polarized si ay uga hortagaan dawakhaad iyo raaxo xidhashada.
Shayga No. L0040
Qalabka Frame PC+Birta
Qalabka muraayada TAC
Midabada 2 midab
Muraayadaha caadiga ah ee kalluumeysiga ragga ee isboortiga leh waxay qaataan macbadyo bir ah iyo fiimyo caag ah si ay u siiyaan walxaha asalka ah heer adag oo adag, si weyn u wanaajiya caabbinta nabarrada iyo ku shaqaynta. Isla mar ahaantaana, oo leh muraayadaha muraayadaha indhaha, waxay sifeyn kartaa faragelin badan oo iftiin aan caadi ahayn waxayna ka fogaan kartaa dhaldhalaalka, dhaldhalaalka iyo ifafaalaha kale.
Markaad baabuur wadid, kuma dhibi doontid iftiinka qoraxda iyo milicsiga tirada badan ee baabuurka ku soo socda. Markaad kalluumaysato, mowjadaha biyuhu waxay iftiiminayaan qorraxda hoosteeda, laakiin ma dareemi doontid raaxo la'aan, laakiin waxaad dareemaysaa raaxo iyo kala daadsanaan. Markaad fasax ku jirto, ha ku raaxaysato qorraxda, xeebta iyo wakhtiga firaaqada si buuxda.
Muraayadahayada muraayadaha leh waxay shaandheyn karaan in ka badan 99% fallaadhaha ultraviolet ee iftiinka qoraxda, iyo waxqabadkooda shaandhaynta ayaa buuxiya shuruudaha heerarka caalamiga ah. Lensku wuxuu leeyahay nashqad muuqaal ah oo muuqaal ah si uu u sameeyo dhidib muuqaal ah si uu u soo saaro sawir muuqaal ah. Indhuhu waa adag yihiin, qalabku waa mid aad u fiican, wuxuuna leeyahay naqshad shaqo oo muuqaal ah, wuxuuna dareemaa raaxo iyo ammaan ka dib xirashada.
muraayad 6-lakab ah oo dahaarka leh, macbadyo dharbaaxo leh ayaa la qabsanaya qaabka wejiga. Shaqada UV400 waxay si wax ku ool ah u xannibi kartaa fallaadhaha ultraviolet. Qalabka birta ah wuxuu ku habboon yahay PC, qaabka ultra-light ma daalin muddo dheer. Ka-hortagga dhididka iyo daxalka, taabasho fiican.
2.Waa maxay heerka alaab-qeybiyeyaasha shirkaddaada?
Alaab-qeybiyeyaasha qalabyada muraayadaha la xidhiidha waa inay u hoggaansamaan heerarka caalamiga ah iyo imtixaannada kala duwan.
3.Waa maxay fikradda cilmi-baarista iyo horumarinta ee alaabta shirkaddaada?
La kaashada suuqyo kala duwan si aad u horumariso alaabada la jaan qaadaysa khadadka warshadaha. Markaad sii waddo horumarinta, hagaaji badeecadihii hore.
Hore: Camouflage muraayadda muraayadda muraayadda ee darawalnimada
Xiga: Hip-hop retro wareega muraayadaha muraayadaha indhaha
Ookiyaalaha Qorraxda ee Ragga oo Laba jibbaaran
Muraayadaha muraayadaha indhaha ee ragga TR90
Hip-hop retro wareega muraayadaha muraayadaha indhaha
Muraayadaha Weyn ee Weyn, Muraayadaha Xisbiga, Muraayadaha Xisbiga ee Shakhsi ahaaneed, Muraayadaha Qorraxda ee La Weyn, Muraayadaha Iftiinka Weyneeya, Muraayadaha Weyn ee Isha Keliya,